I-Muskoka Resort Cottage Enhle
Ikotishi elikhulu eduze kwaseGravenhurst endaweni yokungcebeleka. Amahora angu-2 ukusuka ku-GTA, igugu langempela le-Muskoka. Ukusuka emgwaqeni omkhulu oya endlini encane kungama-20Km ukushayela, ngaphezu kwezihlahla eziningi kanye nemibono emangalisayo kanye nezindawo ezinhle endleleni. Isitezi esikhulu sokuphila kwangaphandle okwengeziwe. Le cottage ilungele imindeni. Ulwandle oluhle oluyimfihlo olunesihlabathi, amachibi okubhukuda, i-kayaking, izikebhe, izinkundla zebasketball/tennis, isikhungo sokudlala sabantwana abasacathula kanye nejimu.
Ikhishi elinamagumbi amabili okulala liyindawo ethokomele elala abantu abayi-6 (abantu abadala abangu-4 ubukhulu) njengokwenqubomgomo yokuvakasha. Ikotishi likwenye yezindawo ezihamba phambili zale ndawo yokungcebeleka, kunehlathi ngemuva kwendlu encane naphambi kwayo, futhi zonke izinsiza zokungcebeleka zisekuhambeni nje okufushane!
Jabulela ikhishi elihlome kahle elinemicrowave, isitofu segesi, ifriji/Ifriji. Iyunithi yesistimu ene-air conditioner ephelele neyokushisisa enosofa wokudonsa, i-TV&blue ray CD/DVD, umgodi womlilo wekamu, isethi yevulandi enhle nendawo eningi yokuphumula. Nginekhethelo lama-DVD emuvi ongawajabulela, noma ungaletha awakho ama-DVD.
Kukhona indawo yokupaka yamahhala endlini yami yemoto eyi-1 kuphela. Ukuze uthole izimoto ezengeziwe kufanele ukhokhe u-$45.00 ubusuku ngabunye esikhungweni sokwamukela abantu, lokhu kuyinqubomgomo ye-resort! Ngincoma ukuthi uhlangane nemoto eyodwa ukuze ugweme lezi zindleko ezengeziwe.
Angivumeli noma yiziphi izinto zasendlini ezinjengezinto zokusika , izihlalo , amapuleti njll ezikhishwe endlini encane ziyiswe endaweni yokubhukuda noma endaweni yolwandle . Noma yiziphi izinto ezingekho endlini encane zizokhokhiswa ekhadini lakho lesikweletu . Ukuphulwa noma ukulimala kwendlu nefenisha kuzophumela ezindlekweni eziphelele zokuyilungisa, ukushintshwa kudonswe ediphozini yakho. Uzokwaziswa ngalokhu kuphuka ngokushesha nje lapho ukuhlolwa kwekotishi kwenziwa ngemva kokuphuma kwakho.
Sicela ufake zonke izihambeli ohambweni lwakho lokuqala, futhi kufanele ubhalise bonke abahlali esikhungweni sokwamukela lapho ufika ngokwemithetho yezokuvakasha.
Isikhathi sokungena ngu-3:00 ntambama futhi ukuphuma kungu-11:00 ekuseni. Ngingazama ukwamukela ukufika ngaphambi kwesikhathi kanye nokuhamba sekwephuzile, kodwa ngicela wenze lawo malungiselelo ngokuqondile
Izilwane ezifuywayo kanye nokubhema akuvunyelwe ngaphakathi kwekotishi .
Ikotishi lizohlanzeka kungenabala uma ungena. Ngiyabonga ukuthi ushiye ikotishi lami lihlelekile ngendlela efanayo njengoba ubungenza uma bekungelakho.
Isivakashi singafinyelela eChibini ngokudoba okumnandi, ichibi lokubhukuda elishisayo, izikebhe zamahhala ze-kayak, amabhodi okugwedla, indawo yokupaka yamahhala yemoto eyodwa, imizila yamabhayisikili, ukugibela izikebhe, isikhungo sokwamukela nge-WIFI yamahhala, isitolo esincane esikhungweni sokwamukela, Ijimu, isikebhe se-pontoon ukuqashwa kwe-Muskoka lake tours , ijimu , ilondolo yemali, i-campfire , inkundla yebhola lomnqakiswano/ithenisi, iklabhu yezingane, isikhungo sokudlala sezingane.
Imoto eyodwa ivunyelwe ukupaka endlini yami encane mahhala. Indawo yokupaka i-Over flow parking iyatholakala endaweni yokupaka izivakashi noma endaweni yokuzivocavoca/yowashwa. Kuzoba khona imali yokupaka ekhokhiswa indawo yokuvakasha engu-$45 ubusuku ngabunye ngemoto ngayinye. Zonke izimoto kufanele zibe nethegi yesivakashi ekhishwe esikhungweni sokwamukela.
Bonke abantu abasebenzisa indawo yokungcebeleka IZINDABA kumele bahloniphe imithetho yesikhungo , izidingo zokuphepha kanye nanoma yimiphi imithetho elawula ukusebenza kwalesi sikhungo . Ukulimala kwezinsiza namathuluzi kungase kubangele izindleko zokushintshwa noma zokukhanda. Ngenxa ye-COVID, indawo yokungcebeleka ayinikezi amajakhethi okuphila, ngakho-ke sicela uphathe awakho noma ungathenga amabhantshi okuphila esikhungweni sokwamukela abantu.
Abazali kulindeleke ukuthi bahlale beqaphile izingane ngaso sonke isikhathi. Izingane akufanele neze zishiywe zingagadiwe echibini lokubhukuda, inkundla yokudlala ebhishi noma kwezinye izindawo zehhotela . Ichibi aligadiwe.
Ngingancoma izivakashi ukuthi ziqinisekise ukuthi upakisha izinto ezixosha omiyane, ngemva kokuluma futhi upakishe umkhono omude namabhulukwe omjuluko ukuze uzivikele omiyane nezimpukane ezimnyama !
Ngiqhuba okwami ukubhuka kanye nokunakekela ikotishi elihluke ngokuphelele ku-Resort. Noma yimiphi imibuzo ephathelene nekotishi lami kufanele iqondiswe kimi kuphela hhayi i-Resort.
Ngizotholakala ngocingo noma nge-imeyili ukuze ngiphendule noma yimiphi imibuzo noma ngixazulule izinkinga ngesikhathi sokuhlala kwakho
Ngiqhuba okwami ukubhuka kanye nokunakekela ikotishi elihluke ngokuphelele ku-Resort. Noma yimiphi imibuzo ephathelene nekotishi lami kufanele iqondiswe kimi kuphela hhayi i-Resort…